उनले कात्तिकको १४ गते आफुले अनुपालाई लिएर गएको भन्ने कुरा थाहा पाएको बताइन् । छोरा ८ कक्षाा पढ्छन् । अब उनलाई कसरी पढाउने ? आफ्नो र छोराको पेट कसरी पाल्ने ? उनलाई निकै चिन्ता परेको छ । (भिडियो)